जिम्मेवारी पाए जे काम पनि गर्न सक्छु - Karobar National Economic Daily
जिम्मेवारी पाए जे काम पनि गर्न सक्छु
query_builderSeptember 6, 2017 9:38 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility2435
भुमा लिम्बु आईसीसी सदस्य, अष्ट्रेलिया
एनआरएनको अभियानमा कहिलेदेखि संलग्न हुनुहुन्छ ?
अष्ट्रेलियामा रहँदै गर्दा सन् २००७ देखि एनआरएनएको अभियानमा संलग्न हुँदै आएको छु । चुनावबाट सचिव लडेर आधिकारिक रूपमा एनआरएनमा संलग्न भएको हँु । सचिवको कार्यकालपछि उपाध्यक्ष पदमा लडें ।
त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) सदस्य भएँ । केही समय ओसियान रिजनको डिपुटी रिजनल कोअर्डिनेटर भएँ । अहिले फेरि आईसीसी सदस्यका छु ।
एनआरएनए लगानीकर्ताको वा सामाजिक संस्था हो, यसलाई कसरी हेर्ने ?
मेरो विचारमा यो संस्था दुवैथरी हो । यसले च्यारिटी र लगानी दुवै गरिरहेको छ । अहिले हेर्ने हो भने एनआरएनएले लगानी पनि धेरै गर्दै आइरहेको छ । सहयोगका लागि विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइले पनि सहयोग गर्दै आएका छन् ।
नेपाल र नेपालीका लागि एनआरएनएको तर्पmबाट मात्र होइन कि अन्य व्यक्ति वा संस्थाले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । विदेशमा रहेका नेपाली आफ्नो गाउँमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र अन्य विकासका काममा आफ्नो तरिकाले धेरै काम गरिरहनु भएको छ ।
च्यारिटीको कुरा गर्दा हामीले भूकम्पपछि धेरै खर्च गरेर बस्ती पुनर्निर्माणको अभियान चल्दैछ । यसबाहेक नाकाबन्दी गर्दा एनआरएनए अध्यक्ष शेष घले आपैंm आएर बंगलादेशबाट औषधी ल्याएर वितरण गर्नुभएको थियो ।
यसरी नै हालै आएको बाढीपहिरोबाट पीडित ५ हजार परिवारलाई राहत वितरण ग¥यौं । त्यस क्षेत्रमा राहतसँगै स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर १ हजार ५ सय जनालाई स्वास्थ्य सेवा पनि दिएका छौं ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि कसरी सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ ?
७५ वटा देशमा एनआरएनएले के भूमिका खेलेको छ भने जति पनि एनआरएन त्यो देशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि एनआएएनए सक्षम र बृहत् संस्था सावित भएको छ । यसैगरी एनआरएनए विदेशमा रहेका सबैको संस्था भएकाले यसमा सबै नेपालीलाई एक बनाउने कार्य गरेको छ । यसरी नै विदेशमा लिएको सिप र ज्ञानलाई नेपालमा ल्याउने काम गरेका छौं ।
उदाहरणका लागि म नेपालमा नर्स थिइनँ । मैले अष्ट्रेलिया गएर अध्ययन गरेको हँु । यसरी मैले विदेशमा सिकेको ज्ञानलाई नेपालमा आएर सबैलाई त्यहाँ सीप बाँड्ने काम गरिरहेको छु । मैलेमात्र सबै एनआरएन सबैले विदेशमा सिकेको ज्ञान स्वदेशमा ल्याएर प्रयोग गरेका छन् । यसरी हेर्दा हामी विदेशमा प्राप्त गरेको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नेपालमा सुहाउँदो प्रयोग गरिरहेका छांै ।
विशेषगरी एनआरएनएको भूमिका स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पनि हो । उदाहरणको लागि भवन भट्टले गरिरहनु भएको छ । उहाँले अथिति देवो भवः देखि एयरपोर्टको व्यवस्थापनका लागि काम गरिहरनु भएको छ ।
उहाँको पहलले गर्दा अहिले आउँदा नेपालको एयरपोर्टमा छुट्टै महसुस गरेको छु । यतिमात्र होइन, रोजगारीका क्रममा विदेश गएका नेपालीको उद्धार र अन्य सहयोगका लागि काम समेत गरिरहेका छौं ।
एनआरएनएको अबको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ?
अबको नेतृत्व पनि निश्चय नै हालको अध्यक्ष शेष घलेजस्तै नै आउनुपर्छ । सबैको सोचाइ फरक होला । व्यक्ति अनुसार नेतृत्व गर्ने सोचाइ फरक फरक हुनसक्छ तर सबैको भावना बुझ्नुपर्छ । तर भावना भन्दैमा एनआरएनए भावनाले मात्र चल्दैन ।
‘फर नेपाली बाइ नेपाली’ भन्ने उद्देश्य अनुसरण गरेर जानुपर्छ । अबको नेतृत्वले यो भावनालाई आत्मसात गर्न सक्ने आफ्नो नेतृत्वमा साना–साना कामदेखि ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ । लाप्राक परियोजनाकै कुरा गर्ने हो भने हालको नेतृत्वकालमा पूरा नभएकोले यसलाई पूरा गर्ने काम अबको नेतृत्वको हो । त्यस्तै नयाँ नेतृत्वको लागि एनआरएनएको सचिवालय निर्माण सम्पन्न गर्ने महत्वकांक्षी चुनौती पनि रहेको छ ।
अब आउने नेतृत्व दुवै परियोजना पूरा गर्नसक्ने चाहिन्छ । यस्तै, शेष घले दाइले ल्याएको भिजन ट्वान्टी ट्वान्टीलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने र उहाँको सपनालाई पूरा गर्न सक्ने भएमात्र हाम्रो एनआरएन दह्रो भएर अगाडि बढ्ने छ ।
भिजन ट्वान्टी ट्वान्टीका बारेमा केही विवाद पनि आयो, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
कुनै पनि कुरामा विवाद आउनु ठिकै नै छ । कतिपय कुरामा विवाद हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । म आईसीसी सदस्य भएकाले भिजन ट्वान्टी ट्वान्टीलाई पूर्ण सहमत गर्दछु । किनभने अहिले हामीले गर्ने काम सबै व्यक्तिगत रूपमा गरिरहेका छौ । भिजन ट्वान्टी ट्वान्टी कार्यन्वयन भए हाम्रो सबै काम छिटोछिटो हुन्छ । काम पनि प्रभावकारी रूपमा हुन्छ ।
महिलाहरू एनआरएनए अभियानमा कम लागेका छन् नि ?
अब समस्या आ–आफ्नो ठाउँमा रहेको छ । मैले पनि आफ्नो कामबाट संस्थाका लागि समय निकालेको छु । मैले यो पटकको बाढीमा बालबच्चा बगाइरहेको फेसबुकमा देखेँ । मैले आफ्नो काम जसरी पनि चल्छ भन्ने सोच आयो र बाढी पीडितको लागि मेरो सहयोग चाहिएको छ भन्ने महसुुस भयो । त्यसैले सहयोगका लागि नेपाल आइरहेको छु ।
भूकम्पमा पनि म दोस्रो दिन नै अष्ट्रेलियाबाट उडेको थिएँ । नेपाल आएर सिन्धुपाल्चोक उद्धारमा जाने पनि मेरै टिम हो । भूकम्पको बेला १८ जना मेडिकल टिमसहित अष्ट्रेलियाबाट आएका थियौँ । हामीले त्यहाँ गएर राम्रो काम गरेका कारण मलाई धेरै प्रेरणा मिलेको छ । भूकम्पका बेला उद्धारको काम गर्न पनि धेरै डराउनुपर्ने अवस्था रहेको थियो । उद्धारका क्रममा जताततै दुर्गन्ध थियो ।
कहिलै नगएको ठाउँ, बाटो साँघुरो थियो । त्यो काम गरेर फर्कंदा धेरै खुशी भएको थिएँ, किनभने मैले धेरैलाई सहयोग गरेको थिएँ । म महिला दिदीबहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भने सबैलाई कर गर्न त मिल्दैन ।
सक्नुहुन्छ र समय छ भने अरु बेला भन्दा पनि आपतविपत परेको बेला देशमा आएर पीडितलाई अंगालो मात्र दिनुभयो भने उहाँहरूलाई भरोसा महसुस हुन्छ । त्यसमा पनि गाउँ–गाउँमा गएर उहाँहरूको कहानी सुन्दा अर्को आनन्द आउँदो रहेछ ।
हालै बाढी पीडितको सहयोग व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो ?
बाढी पीडितको सहयोगका लागि मैले स्वास्थ्य टोलीलाई नेतृत्व गरिरहेको थिएँ । सरकारले सप्तरीमा काम गर्न एनआरएनएलाई तोकिदिएको थियो । एनआरएनए अध्यक्षको नेतृत्वमा एनआरएनएको उद्धार टोली गएको थियो ।
मेडिकल टिमको कुरा गर्दा काठमाडौंबाट लैजाँदा महँगो पर्ने भएकाले स्थानीयलाई संयोजन गरेर काम गर्ने निर्णय भएको थियो । सबै काम च्यारिटीमा गरेका कारण उताको नै स्वास्थ्य टोलीलाई काम लगाउने योजना बनाएको हो । स्वास्थ्यकर्मीको टोली धरान, दमक, इटहरी र विराटनगरबाट ५ जना डाक्टर ९ जना नर्सको व्यवस्था गरिएको थियो । स्वास्थ्यसेवा एकदम प्रभावकारी रूपमा गरेका कारण हामी धेरै खुशी छौं । सो काममा सहयोग गर्ने डाक्टर र नर्सहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
तपाईंलाई अबको महिला संयोजकको नेतृत्व गर्ने तहमा हेरिँदै छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
मैले अहिले पनि काम गरिरहेको छु र त्यो जिम्मेवारी पाए अवश्य नै गर्न सक्छु । अहिले जे गरिरहेको छु, यो भन्दा अभैm राम्रोसँग गर्नेछु ।
चुनाव लगानीकर्ता एनआरएन